कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई आयो यस्तो सूचना । - Abhiyan news
कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई आयो यस्तो सूचना ।
१६ असार २०७८, बुधबार १६:१८ अभियान न्यूजLeaveaComment on कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई आयो यस्तो सूचना ।
काठमाडौँ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा भदौ महिनासम्ममा फरक मोडालिटीमा गर्ने भएको छ । तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आई नसकेका कारण अबको केही समय स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षाबारे निर्णय गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
परीक्षा गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा गर्न बोर्डले गृहकार्य समेत थालेको छ ।बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले असारभर पर्ख र हेरकै अवस्थामा बोर्ड रहेको भन्दै त्यसपछि मात्र परीक्षाको तयारीका बारेमा छलफल थालिने जानकारी दिनुभयो ।
भदौसम्म परीक्षा हुने सम्भावना देखिएको र त्यो गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा हुने उहाँको भनाइ छ ।कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले बिना परीक्षा विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने भएकाले केही महिना पर्खेरै भए पनि पुरानै मोडेलबाट परीक्षा लिने बोर्डको तयारी छ ।
सामाजिक सेवाको प्रचार किन धेरै गर्छन् सेलिब्रिटी ?
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी, परीक्षा बोर्डको बैठक बस्दै
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०२:२६ अभियान न्यूज
७ पुष २०७८, बुधबार ०३:३९ अभियान न्यूज